Andro antoandrobe, tetsy 67 ha… : taksibe sprinter-n’Ivato nivadika, nandratra olona – Vaovao Madagasikara
Canada: Entretien avec l'écrivain malgache Naivo pour la sortie de son livre aux USA.
Social, Tia Tanindrazana
Olona dimy no naratra, taxi roa no voadona sy potika, hatramin’ny sarety koa aza. Ireo no vokatry ny lozam-pifamoivoizana nitranga tetsy 67 ha, omaly antoandro, noho ny nafitsok’ity taksibe sprinter-n’Ivato, voalaza fa nitrifana sy nandeha mafy ka izao nivadika sy nitera-doza izao.
Nampitolagaga ny mpitazana! Taxi-be Sprinter mampitohy ny Renivohitra sy Ivato no nivadika teny 67 ha, omaly tolakandro. Raha ny hita teny an-toerana, eo am-povoan’arabe, amin’ny andro mazava be, ary mbola am-povoan-tanana ihany koa. Olona dimy no naratra vokatr’ity loza ity. Simba ny fiara ary nisy ihany koa ireo fiara hafa voakasika tamin’izany.
Araka ny fanazavan’ny olona nahita maso ity loza ity, nandeha mafy ilay taxi-be io, somary nalalaka ny arabe, ka izay ny nampivadika azy. “Toy ny tsy nahatana familiana ilay mpamily ka tafakatra tamin’ny dongona ny fiara ary nivadika avy hatrany. Soa ihany fa tsy nifatratra tamin’ny mpandeha an-tongotra izy io, fa raha tsy izany, faty nikararana”, hoy ny filazan-dRaliva, nahita maso ity lozam-pifamoivoizana ity.
Nanararaotra ny lalana somary nalalaka ity taxi-be ity, nifanenjika ihany koa ireo, ka izany no niteraka ny loza. Nosokirina tao anaty fiara ireo naratra, izay soa ihany fa vitsivitsy ny olona tao anatiny. Ny olona nitangorona kosa no tezitra nahita ity toe-javatra ity, ka na teo aza ny fanavotana natao ireo naratra, tsy afaka kosa ny tabataba sy ny fanomezana tsiny ilay mpamily taxi-be. Ity farany, toy ireny mamo, na mody adala ireny nanoloana izany rehetra izany. Tonga teny an-toerana ny polisy nanao ny fizahana, ny famotorana sy nandamina ny filaminana ary ny fifamoivoizana.
Efa miverina matetika
Araka ny fanamarihana nataon’ny olona, efa miverimberina matetika loatra ny fahadisoana sy fandikan-dalàna ataon’ny taxi-be, indrindra ireo mpanao Ivato. Rehefa tsy eny amin’ny lalana Digue mamoa-doza, izao aty am-povoan-tanana indray. “Efa fanaon’ireo taxi-be ireo mihitsy ny toy izao, ary tsy mahagaga raha ahitan-doza. Mahafaty olona mihitsy ireo”, hoy ny mpanao fanamarihana.
Tsy misy tsy manome tsiny taxi-be sy ny mpamily, hatrany anaty tambajotra sosialy, ny mpandeha anaty taxi-be, sns. Maro ny tsy fanarahan-dalàna mampitaraina ny olona. Eo ny fandehanana mafy, ny fiverenana antsasa-dalana, ny tsy fanajana ny mpandeha. Ankoatra ireo ny faharatsian’ny fiara fitaterana sasany. Ny seza ratsy, ny loto, sns, kanefa rehefa misy ny fiakaran’ny solika, mailaka amin’ny fampiakarana saran-dalana sy ny fitakiana samihafa. Aiza ny zon’ny mpanjifa ? Taxi-be natao ho an’ny vahoaka ary miasa ho an’ny vahoaka. Rehefa tsy mahatsapa tena ny tompon’izy ireny, aiza ny fandraisana andraikitry ny fanjakana mampitsahatra ireo tsy ara-dalàna ?
« Mon gouvernement n’a jamais promis la lune » (Gabriel Ramanantsoa)